moi: September 2016
မုန့်တီ၊ မုန့်ဖတ်နှင့် ခေါက်ဆွဲများတွင် ဖော်မလင်ကင်းစင်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင် ထုတ်လုပ် နိုင်ရေး အတွက် အသိပညာပေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူးကျင်းပမည့် မုန့်တီ၊ မုန့်ဖတ်နှင့် ခေါက်ဆွဲများတွင် ဖော်မလင် ကင်းစင်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင် ထုတ်လုပ် နိုင်ရေး အတွက် အသိပညာပေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို အောက်တိုဘာ ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ Dolphin Hotel ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ မုန့်တီ၊ မုန့်ဖတ်နှင့် ခေါက်ဆွဲထုတ်လုပ် သည့် လုပ်ငန်း ရှင်များနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အာဆီယံ ပါလီမန်များ ညီလာခံ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးနှင့် အာဆီယံ ပါလီမန်များ ညီလာခံ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ရာထူး လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကျင်းပ
(၃၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ပါလီမန်များ အထွေထွေ ညီလာခံ၏ အာဆီယံပါလီမန် များ ညီလာခံ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးနှင့် အာဆီယံ ပါလီမန်များညီလာခံ အထွေထွေ အတွင်းရေး မှူးချုပ်ရာထူး လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်း အနားကို ယနေ့နံနက်(၈)နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန အမှတ်(၁) (MICC – 1) မြခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းက အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံဥက္ကဋ္ဌရာထူးကို လွှဲပြောင်းလက်ခံသည်။
Posted by moi at 7:48 PM No comments:
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်သည် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မဒမ် ငုယင်သီကင်ငမ်း ဦးဆောင် သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ယနေ့ ညနေ ၄ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတအိမ်တော်သံတမန် ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Posted by moi at 7:44 PM No comments:
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
တာဝန်ပြီးဆုံး၍ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ မူရတ်ရာဘုစ်အက်တိစ် အား ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေသည် ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော်သံတမန်ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
Posted by moi at 7:42 PM No comments:
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများနှင့် အာဆီယံ ပါလီမန်များ အစည်းအရုံးအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်သည် (၃၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ပါလီမန်များညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် အာဆီယံ နိုင်ငံများမှ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် အာဆီယံပါလီမန်များ အစည်းအရုံး အတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့အား ယနေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော် သံတမန်ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ၏ အထွေထွေလှုပ်ရှားဆောင် ရွက်မှုများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကွာဟချက်များ ပပျောက်စေရေး အပါအဝင် စိန်ခေါ်မှုများ နှင့် ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်က (၃၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံသို့ သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့သည် အဆိုပါသဝဏ်လွှာ အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
လေးစားအပ်ပါသော အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး များနှင့် ဧည့်သည် တော်များ ခင်ဗျား ယခုကဲ့သို့ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့် (၃၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ပါလီမန်များ အထွေထွေ ညီလာခံ ကျင်းပသည့် အခါသမယတွင် အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကိုယ်စားလှယ် တော်ကြီးများအား ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် နွေးထွေးစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။ (၃၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ပါလီမန်များ အထွေထေ ညီလာခံကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ နေပြည်တော်၌ လက်ခံကျင်းပခွင့် ရရှိသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။ (၃၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ ဆောင်ပုဒ်အဖြစ် “အာဆီယံအသိုက်အဝန်း တိုးတက်ထွန်းကားရေး အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံက တက်ကြွလှုပ်ရှားပေး” ကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်စွာ မှတ်သား ရပါသည်။
Posted by moi at 6:26 PM No comments:
ပြည်ပ၌ တရားမဝင်ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် အလုပ်သမား များစာရင်းရရှိရေးကို နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်အတူ နိုင်ငံသားတိုင်း ဝိုင်းဝန်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်
နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် စီးပွားရေးမူဝါဒ ၁၂ ရပ်ကို ချမှတ်အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးအတွက် အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ထုတ်ပေးရန်နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းမြင့် မားသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကာလတိုအတွင်း ပိုမိုဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် အလုပ်အကိုင် မူဝါဒနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် သမားဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုလည်း ချမှတ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည်။
နှစ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် အပြန်အလှန် သတင်းဖလှယ်ရယူမှု အပါအဝင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မှုတိုးမြှင့်ရေး ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေး
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတော် ကောင် စီဝင်၊ ပြည်သူ့ လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး မစ္စတာကောင်းရှန်ခွင်နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော် ရှိ ဇေယျာသီရိ ဗိမာန်ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
မြန်မာ-အီတလီ တပ်မတော် အပြန်အလှန် အတွေ့အကြုံ ဖလှယ်ခြင်း အဆင့်အလိုက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဆက်ဆံမှု ပိုမိုတိုးမြှင့်ရေးဆွေးနွေး
ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် အီတလီတပ်မတော် စစ်ဦးစီးအရာရှိ ချုပ်ရုံး၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဌာနမှ ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ် Roberto Ciammaichella အား ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင် ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Greg Vines နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ (၂၇)
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရေးရာအဖွဲ့ (ILO) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Greg Vines နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲ (၁)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး (၄၁) ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး (၄၁) ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ မေးခွန်း ၃ ခုမေးမြန်းဖြေကြားကြပြီး အဆိုတစ်ခုအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး မစ္စတာ ကောင်းရှန်ခွင်နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင်၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး မစ္စတာ ကောင်းရှန်ခွင် နှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၀နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတအိမ်တော် သံတမန် ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Posted by moi at 6:49 PM No comments:
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ နယ်သာလန်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေအရင်းအမြစ်ရေးရာ အထူးသံတမန် Mr. Henk Ovink နှင့် အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေအရင်းအမြစ်ရေးရာ အထူး သံတမန် Mr. Henk Ovink နှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတအိမ်တော် သံတမန်ဆောင်ဧည့် ခန်းမ ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သူများအတွက် ရာသီဥတုဖိုရမ်နှင့် (၉)ကြိမ် မြောက်တောင်အာရှဥတုရာသီပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာသုံးသပ်ဆွေးနွေး
ကမ္ဘာ့မိုးလေ၀သ အဖွဲ့ချုပ်(WMO)နှင့် ကနေဒါနိုင်ငံအစိုးရတို့၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ဒေသတွင်းဘက်စုံ သဘာဝဘေး ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဗဟိုဌာန (RIMES) တို့ ပူးပေါင်း၍ (၉)ကြိမ် မြောက်တောင်အာရှ ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲ
Posted by moi at 6:30 PM No comments:
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၉ ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ
နိုင်ငံတော်၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီး ၂နှစ်အတွင်း ပျက်စီးမှု ရှိပါက တင်ဒါအောင်မြင် သူမှ ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးရ မည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းပြီးစီးရက်ထက် ကျော်လွန်ပါကလည်း လုပ်ငန်းအပေါ် လိုက်၍ ဒဏ်ကြေးပေး ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် က ပြောကြားသည်။
Posted by moi at 4:40 PM No comments:
(၃၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေ ညီလာခံကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီ အစည်းအဝေး (၇/၂၀၁၆) ကျင်းပပြုလုပ်
(၃၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံကျင်းပရေး ဦးစီး ကော်မတီ နောက်ဆုံးအစည်းအဝေး (၇/၂၀၁၆) ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ယနေ့မွန်းလွဲ ၃နာရီတွင် ကျင်ပသည်။
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ (၆၇)နှစ်မြောက် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်သည့်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲသို့ တက်ရောက်
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည် ယနေ့ညပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန-၂ Banquet Hall ၌ ကျင်းပသည့် (၆၇)နှစ်မြောက် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်သည့်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည်။
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှု ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေး
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေသည် The Centre for Humanitarian Dialogue (HD) အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Adam Cooper နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ ညနေ(၃)နာရီ တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
Posted by moi at 4:59 PM No comments:
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လန်ဒန်၊ အမေရိကန် တရားဝင် ခရီးစဉ်နှင့် (၇၁)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတူ လန်ဒန်မြို့ခရီးစဉ်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသုိ့ သွားရောက်သည့် တရားဝင် ခရီးစဉ်နှင့် (၇၁)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ယနေ့ ညပိုင်းတွင် လေကြောင်း ခရီးစဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နှင့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) က ဖွဲ့စည်းထားသည့်နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ (DPN) တို့ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်တွင် တွေ့ဆုံမည်
ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နှင့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) က ဖွဲ့စည်းထားသည့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ (Delegation for Political Negotiation – DPN) တို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့၌ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကို စွမ်းရည်ပြည့်ဝစွာထမ်းဆောင်နိုင်ရန် တိုက်စွမ်းရည်၊ တိုက်စွမ်းအားကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်
အချိန်၊ ငွေ၊ လုပ်အားများစွာ အကုန်အကျခံပြီး လေ့ကျင့်နေခြင်းသည် တပ်မတော်၏ အဓိကတာဝန်ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကို စွမ်းရည်ပြည့်ဝစွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုပြုလုပ်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းသည် ပြည်ပရန် ကာကွယ်ရေးအတွက် သမာရိုးကျစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ရန် အဓိကရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကာကွယ်ရေး၊ စစ်ရေး ဆိုသည်မှာ ကောက်ကာငင်ကာလုပ်၍မရဘဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု၊ လေ့ကျင့်မှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ဦးချင်း တစ်ဖွဲ့ချင်းအလိုက် လေ့ကျင့်သားပြည့်ဝအောင် တိုက်စွမ်းရည်၊ တိုက်စွမ်းအားကောင်း အောင် ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောကြားသည်။
Posted by moi at 6:23 AM No comments:
Posted by moi at 6:06 AM No comments:
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ ပေါင်းလောင်းရေလှောင်တမံဘက်စုံစီမံကိန်း၊ နန်ချိုရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံနှင့် အထက် ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ပေါင်းလောင်းမြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် ပေါင်းလောင်းရေလှောင်တမံဘက်စုံ စီမံကိန်း၊ နန်ချိုရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံနှင့် အထက် ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကြီးအကဲများနှင့် သီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နယူးယောက် စက်တင်ဘာ ၂၃
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယမန်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီတွင် CNN သတင်းဌာနမှ GPS Editorial Producer, Mr. Fareed Zakaria နှင့် နယူးယောက်ခ်မြို့ရှိ မြန်မာအဖွဲ့ရုံး၌ တွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်း ချက်များကို ဖြေကြားသည်။
အမျိုးသား သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းကော်မတီမှ ဦးဆောင်၍လာနီညာ အတွက်ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုနှင့် ပြီးခဲ့သည့်ဘေးများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အစည်းအ‌ဝေးကျင်းပ
အမျိုးသားသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းကော်မတီမှဦးဆောင်၍ လာနီညာအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် ပြီးခဲ့သည့်ဘေးများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အစည်းအ‌ဝေးကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ စုပေါင်းအစည်းအ‌ဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ အမျိုးသား သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဌ၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထား ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယမန်နေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်၌ကျင်းပသည့် (၇၁) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ အထွေထွေမူဝါဒရေးရာ မိန့်ခွန်း ပြောကြားခြင်း အစီ အစဉ် ဒုတိယနေ့ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။
Posted by moi at 7:20 PM No comments:
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး (၃၈) ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး (၃၈) ရက်မြောက်နေ့ ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ မေးခွန်း (၈) ခုမေး မြန်းဖြေကြားခြင်း၊ အရေးကြီးအဆိုနှင့်အဆိုတစ်ခု တင်သွင်းခြင်း၊ အစီရင်ခံစာတစ်ခု ဖတ်ကြားခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ကြသည်။
Posted by moi at 5:56 PM No comments:
Posted by moi at 5:31 PM No comments:
(၃၄)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံစွမ်းအင်ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနှင့်ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများကျင်းပ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ စွမ်းအင်ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စများဆွေးနွေး
(၃၄)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံစွမ်းအင်ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး၊ အာဆီယံစွမ်းအင်ဖိုရမ် ၂၀၁၆ စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် (၉) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိ မြို့နယ်၊ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟို ဌာန(၂)၌ ကျင်းပသည်။ အဆိုပါ ဖွင့်ပွဲအခမ်း အနားသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ရှေ့နေချုပ်၊ စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီး အကဲများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ကြသည်။
Posted by moi at 5:59 PM No comments:
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယူနက်စကိုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒိန်းမတ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ မက္ကဆီကိုသမ္မတ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဝန်ကြီးချုပ်တို့နှင့် သီးခြားစီတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ယူနက်စကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Ms.Irina Bokova တို့သည် ယမန်နေ့ ဒေသ စံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် လည်း ကောင်း၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Mr.Lars Lokke Rasmussen နှင့် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် လည်းကောင်း ၊ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ သမ္မတ Mr. Enrique Pena Nieto နှင့် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် လည်းကောင်း ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စစ် ရှိတ်ဟာဆီနာနှင့် နံနက် ၁၁ နာရီ တွင် လည်းကောင်း နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်၌ သီးခြားစီ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Posted by moi at 1:43 PM No comments:
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ကနေဒါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကနေဒါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Mark McDowel အား နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်သည် ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။“
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေး (၃၆) ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး (၃၆) ရက်မြောက် နေ့ကို ယနေ့ နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်း အဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ မေးခွန်း ၆ ခု မေးမြန်းဖြေကြားခြင်း၊ ဥပဒေကြမ်း တစ်ခုတင်သွင်းခြင်း၊ လေ့လာ တွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြားခြင်းနှင့် နိုင်ငံ သား များ၏ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် လုံခြုံမှုကို ကာကွယ် ပေးရေး ဥပဒေကြမ်း ၏ ပြင်ဆင်ချက်အဆိုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တာဝန်ပြီး ဆုံး ၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာ မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကနေဒါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ -၂၀
မိမိတို့အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်နိုင်သည့်၊ ပြည်သူလူထုကအားကိုး ရသည့်၊ တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုနိုင်သည့် တပ်မတော်ဖြစ်စေရန် ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက် လျက် ရှိကြောင်း၊ မိမိတို့၏လုပ်ဆောင် ချက်များအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သည့် သုံးသပ်ချက် များရှိသကဲ့သို့ တစ်ချို့အပြုသဘော မဆောင်သည် များလည်းရှိကြောင်းဖြင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ယနေ့မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲ တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင် ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည် ထွက်ခွာ မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကနေဒါနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.န မြ. Mမေု ခြ Dသတနူ အား လက်ခံတွေ့ဆုံရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၇၁)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် မိန့်ခွန်း ပြောကြားမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် ရေဒီယို အစီအစဉ် နှင့် အခြားရုပ်သံလိုင်းများမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည်
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ (၁၉၃)နိုင်ငံ စုပေါင်းပါဝင်သည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး၏ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ ညီလာခံများကို နှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိရာ (၇၁)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ ကို ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်တည်ရှိရာ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူး ယောက်မြို့ တွင် စက်တင်ဘာ (၂၀)ရက်မှ စက်တင်ဘာ (၂၆)ရက်အထိ ကျင်းပသွား မည်ဖြစ် သည်။
(၃၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီအစည်းအဝေး (၆/၂၀၁၆) ကျင်းပ
(၃၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီအစည်းအဝေး (၆/၂၀၁၆) ကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ယနေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင် ကျင်းပသည်။ အစည်းအဝေးသို့ (၃၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
နိုင်ငံတကာလူငယ်များ ပေးစာရေးပြိုင်ပွဲ ပြည်တွင်းအဆင့် ဆုအသီးသီးဆွတ်ခူး
၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ကမ္ဘာ့စာပို့တိုက်နေ့ (World Post Day) အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် နိုင်ငံတကာလူငယ်များ ပေးစာရေးပြိုင်ပွဲကို ကုလသမဂ္ဂ ပညာ၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (UNESCO) နှင့် ကမ္ဘာ့စာပို့တိုက်သမဂ္ဂ (UPU) တို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်အဖြစ် အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အောက် နိုင်ငံတကာ လူငယ်များ ပေးစာရေးပြိုင်ပွဲ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် ကျင်းပပေးခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လူငယ်မူဝါဒ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ဦးဆောင်၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ လူငယ်များနှင့် ပူးပေါင်းရေးဆွဲလျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ လူငယ်မူဝါဒတွင် လူငယ်များကိုယ်တိုင် ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်များ
မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဗဟိုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်နေမှု ကြည့်ရှု့စစ်ဆေး
မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဗဟိုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ သန်းမြင့် ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်၊ ဦးကျော်မျိုး၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့်ထွက်ခွာပြီး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်မြို့ရှိ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းဆောင်ရွက် နေမှုကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
Posted by moi at 6:46 PM No comments:
Posted by moi at 4:37 PM No comments: